I-Osteospermum - imbewu ekhula ekhaya, ukutshala nokunakekelwa
I-Osteospermum - ekhulayo imbewu ekhaya, iseluleko esiwusizo sabalimi bokuqala
I-Osteospermum, ukulima okuvela kwimbewu okubhekwa njengemisebenzi elula, kuzohambisana nabalimi besiqalo. Izimila ezimila isikhathi eside zithatha cishe noma iyiphi inhlabathi, ibekezelela isomiso futhi ayidingi ukwelashwa kwesistimu ngokumelene nezinambuzane. Kuphela ngesihlahla esivuthayo sokushisa okude isikhathi eside okumisiwe okwesikhashana, ngemuva kokushintsha isimo sezulu, siphinde sigcwele izimbali.
I-Osteospermum - incazelo
Lo mmeli womndeni we-astroids unamanye amagama amaningana awaziwa ngabalimi bembali: iCape chamomile, i-African noma i-Carpathian daisy. Uthando lwabalandeli bembali luye lwazuza izimbali eziningi eziluhlaza, okuhlala izinyanga eziningana kuze kufike ngoSepthemba. I-flower osteospermum ibonakala njengesihlahla esinomqhele obukhulu. Lesi sitshalo sihlanganiswa kakhulu nge-inflorescences ye-shades ekhanyayo ye-violet, eluhlaza okwesibhakabhaka kanye ne-pink.
Isici esihlahleni ema-inflorescences ayo, esitholakala emaphethelweni. Kuzo zakhiwa imbewu, umthunzi wezimpaphe njalo uhlukile embala wezimbali eziphakathi. Isiqalo sezimbali kumele kudingeke ukutadisha ngokucophelela ukupakisha kumbhangqwana wokuqala, ngoba i-osteospermum ivame ukunikeza esinye isitshalo- dimorphoteku efanayo. Ngaphandle, zifana kakhulu, kepha i-osteospermum iyaphela, ne-demorfoteka - yonyaka.
I-osteospermum - ekhulayo evela emakhaya ekhaya
Uma umsebenzi ukukhulisa i-osteospermum ethile, ukukhula kwembewu kuyoba yingozi, ngoba ayinikeli 100% ukulondolozwa izici varietal. Kwezinye izimo, akufanele kube nezinkinga nge-seedling. Imbewu ye-osteospermum ukutshala nokunakekelwa kukhetha izimo ezijwayelekile nezikhululekile zezinhlobo eziningi zezitshalo. Ubukhulu obukhulu benza umsebenzi kube lula. Ukuzitholela esitshalweni esiphelile kulula: inyanga yokugcina iba isiqalo sokuguquka kwembali, maphakathi nendawo igcwele kancane kancane imbewu. Zombala omnyama futhi zibonakala ngokucacile.
I-Osteospermum - imbewu yokutshala
Ngokuhlwanyela kahle nokunakekelwa okuqhubekayo, kusukela ngesikhathi imbewu inena emhlabathini kuze kube khona izimbali, kuzodlula amasonto ayishumi kuphela. Izincomo zendlela yokuhlwanyela i-osteospermum ngezithombo zilinganisani futhi zonke zikwazi ukuqala isivini.
Ukuze kuhlungwe izithombo, ingxube engavamile ye-peat nesihlabathi ikhethiwe. Kubalulekile ukuthi idlulise umoya kahle futhi ingabi negalelo ekudleni kwamanzi.
Imbewu eyomile ihlanganiswe ne-0.5 cm inothpick.
Ukushisa okunethezeka kungama-20-22 ° C. Ngaphansi kwefilimu ku-microclimate, isitshalo sidinga isonto ukunikeza amahlumela okuqala.
Lapho kuvela amahlumela, izinga lokushisa liyancipha kancane futhi isitsha sinomhlabathi sishukunyiselwa endaweni ekhanyisiwe.
Nini ukuhlwanyela i-osteospermum kwizithombo?
Spring iyisikhathi esihle sokuqala kokulima. Isikhathi esivela phakathi kukaMashi kuze kube maphakathi no-Ephreli yisikhathi esifanayo nesikhathi lapho imbewu izoba khona ngesikhathi sokunikeza izithombo, izithombo ziyokhula ziqinile, nomhlabathi ovulekile uzofudumala. Noma kunjalo, ukubeka izithombo ezenziwe ngomumo ngokushesha emibhedeni akukhuthazwa. Uma unquma ukuthi uzotshala nini i-osteospermum ngezithombo, kubalulekile ukubala isikhathi sokuphoqelela nesimo sezulu esilindelekile. Cishe ngoMeyi, izithombo ziqala ukuqiniswa indlela yokususa amabhokisi kuma-balconi nase-loggias, indawo ewindini evulekile ivunyelwe.
Kungani i-osteospermum ingaveli?
Izinkinga ngokuphoqelelwa kwezithombo akufanele ziphakame. Imbewu mikhulu futhi kulula ukuyisebenzelana nayo, ayinokuzithoba futhi kulula ukukhula. Izinkinga zingabonakala uma ufuna ukusiza inzalo ukuthola izakhi eziningi. Iningi lezinto zokutshala ezinokuqeda kokuqala noma ezengeziwe zokuhlinzeka zinikeza imiphumela esheshayo nenhle.
Ngenhlamvu ye-osteospermum uhlelo olunjalo alusebenzi. Umswakama ongapheli awuyithandi, ngakho-ke funa utshale imbewu ngokukhethayo eyomile. Esikhundleni sokusibekela, abalimi bayelulekwa ukuba babambe imbewu emgqeni omanzi omanzi ogcwele ukukhushulwa kokukhula . Impendulo, zingaki izinsuku ze-osteospermum ezikhuphukayo, zishintsha phakathi kwezinsuku ezingu-5-7. Uma amahlumela engabonakali, imbewu yabola enhlabathini.
Ungadlulela kanjani i-osteospermum?
Uma imbewu itshalwe ebhokisini elivamile, isikhathi sokufika kumabhodwe ngamanye kuzofika emva kokuvela kwamaqabunga amathathu wangempela. Isigaba se-pixie se-osteospermum sinkimbinkimbi, sidinga amakhono athile. Ukungathobeki nokuhluma okuhle kwembewu kwenza kube lula umsebenzi wesimuli kuphela esigabeni sokuqala. Uhlelo lwempande lensimu luyinkimbinkimbi kakhulu futhi kulula ukulimaza lapho kuguqulwa. Ngakho-ke, abalimi bezimbali abanolwazi, ukutshala i-osteospermum, bakhetha ukukhula kusuka ezinkalweni ezihlukene.
I-Osteospermum - ukufika nokukhathalela emhlabathini ovulekile
Ifomu elikhuni futhi eliphoqelelayo isithombo semifino enhle esinezilinganiso eziphezulu emhlabathini ovulekile. Ngokuvamile ukuqala kokuqala kweqanda kuqala, ukugqama nokugqamile kwesihlahla kuzoba khona. Ngokuvamile ukuqala ukuthukuthela kuqala, kulula kakhulu ukudlulisela izimo ezintsha.
Ukuphela kukaMeyi kuthathwa njengesikhathi esihle sokutshala izithombo endaweni enomphela ensimini yembali. Ukubunjwa kwenhlabathi kungathuthukiswa ngokusebenzisa isanti, i-turf kanye ne-humus ukuze kufezeke ukukhululeka nokuvimbela ukutshala ukubola.
Ukutshala insimu yemifino efanelekayo endaweni enelanga nezolile. Uma isihlahla siqala ukukhanya, izimbali zayo zizocaca. Kodwa-ke, e-penumbra i-osteospermum iqhuma kakhulu futhi ngempumelelo.
Phakathi kwamahlumela ushiye 20-25 cm, ngoba ukulima nokufaneleka okusemandleni e-osteospermum evulekile kuyokwazisa futhi kuzojabulisa ngokukhula okusheshayo. Izinsuku ezintathu zokuqala ukugxila izithombo kuzokusiza ukusalela ekuseni nokuhlwa. Lapho isihlahla sikhula sisayizi obukhulu, ukuchelela kunciphile. Lesi sitshalo sibekezelela isomiso kahle futhi asidingi inhlabathi enomanzi.
Ngemuva kokuqothula, umbhede ungafakwa nge-nitrogen noma umanyolo obunzima.
Kodwa imbali ayidingi ukwelashwa kusuka ezinambuzane. It has a flavour othize futhi eqinile. Uma ungagcwalisi ukutshala, izifo zidlula e-osteospermuma ehlathini.
Izimbali ezingenakuzithoba zasendlini
I-Cypress - ukunakekelwa
Impophoma e-cottage ngezandla zabo
Indlela yokugcina i-zucchini ebusweni busika?
Ukutshala thai entwasahlobo
Indlela yokutshala pepper ezitsheni?
Ungamanzi kanjani utamatisi emva kokutshala?
Iyini inhlobonhlobo enhlobonhlobo yamatamatisi?
I-currant emnyama - izinhlobo
Ukuhlelwa kwemvelo kwesakhiwo esincane - imibono engcono kakhulu namathiphu omklamo ophumelelayo
Izindawo zokuhlala zaseMalaysia
Umshini wokugeza awufaki
Izithombe ezingu-40 ze-zhutayshih zezilwane zasendle, okuzokwenza ukuthuthumele!
Ukususa upende kusuka ezinwele - ubuyele emvelweni
I-Dream Ukuhumusha - izinwele, kungani amaphupho ngezinwele?
Isongo segolide ekhanda
Cottage ushizi casserole nge amajikijolo
I-atopic dermatitis ezinsaneni - ukwelashwa
Amaqabunga avela ku-guipure ne-lace
Umkhuhlane wezintambo ezinyangeni ezinganeni
Ifilimu le-17 leminyaka eRussia
Jamu kusuka ku-cherry plums
I-bronchitis enhle ezinganeni
I-Dantinorm baby - umhlahlandlela womsebenzisi
Yini ukupheka kusuka pepper isiBulgaria for dinner?
UJennifer Aniston uthethelele ngokukhululekile uBrad Pitt, kunokubangela ulaka lomyeni wakhe ...
Ama-Makeup Chicago ama-30-ies
© 2020 zu.unistica.com